Omunye izinhlobo umphakathi we athletics - ke ukweqa. Ngokusho kwakhe mncintiswano ligcinwe phakathi ochwepheshe, kodwa ubani efunda esikoleni esiphakeme, khumbula ukuthi ngokomzimba ngothisha baphoqeleka ukuba sifinyelele phezu bar kanye ilungelo umhlaba trampoline. Mhlawumbe hhayi wonke umuntu wayekwazi ukubaluleka lo msebenzi onjalo, kodwa eqinisweni gxuma eliphezulu uvumele ukuthuthukisa ngokugcwele emzimbeni wakhe, okungenani iminyaka esikoleni esiphakeme.
Ingqikithi kuzuba okusezingeni eliphezulu
Lo mdlalo kakhulu eba eguquguqukayo kanye jumping. Yingakho-ke likhona lwezifundo zesikole nazo zonke umfundi kufanele akwazi ukugxuma. Ingqikithi lesi sivivinyo ilula: setha isigxobo ezimbili mpo, phakathi okuyinto bar ovundlile, obude kuyinto adjustable. Ngenxa yalesi ukwakhiwa, le amacansi ahlelwe, okuyinto evumela jumping ukuze akufake ukuwa futhi kuvimbele ukulimala. Indlela gxuma esithathwayo ngaphesheya kusuka emugqeni, phambi umsubathi wakhe kufanele uphushe nzima njengoba kungenzeka ukundiza phezu bar, hhayi ukulahla kuso. Akuwona neze umsebenzi olula, kodwa uma njalo ukuqeqeshwa, ungakwazi ngcono umzimba wakho futhi safinyelela wake entsha.
Kunezindlela ezahlukene uziphonsa emanzini ukuphakama, kodwa ngokomthetho ezimbili kuphela. Agcina eseyinto ethandwa kakhulu, manje selisetshenziswa ngisho imincintiswano international. gxuma High indlela "isinyathelo phezu" yisona esikhulunywa abantu abaningi phakathi abalandeli, ngoba ilula kakhulu ukwenza. Ngosizo ukuqeqeshwa ezikoleni, kodwa isikhathi eside ke alisetshenziswa mncintiswano, njengoba alinikezi Imiphumela okwanele. nencazelo yalo itholakala lokuthi ukuthi ngemuva kokuqalwa ngesikhathi lo msubathi gxuma lokuqala ngiwele ibha nomunye ngezinyawo bese enye. Ayikho into elukhuni, kodwa ukuphakama kuyadingeka namanye amazwe, kumane nje akunakwenzeka ukufeza. Ngakho-ke, amaphutha indlela yasungulwa isitayela ezahlukene, ethiwa "Fosbury Flop". Umsubathi kuthatha run akuyona ngqo idayagonali, kanye arc, kuyilapho gxuma is ziphenywe emuva phansi futhi ushukumisela kancane kancane umzimba wakhe phezu bar, kusukela ngasekhanda liphetha izinyawo. Lo mbono ikuvumela ukuba sifinyelele ephakeme kakhulu kunalokho uma usebenzisa isinyathelo phezu, ngakho-ke iyona ezivamile phakathi ochwepheshe.
High Jump imincintiswano babe uhlelo abo, okuyinto akulula kangako ukuqonda.
Kufanele uqale neqiniso lokuthi iqembu njalo imizamo ezintathu, futhi wayenethemba bungaveli mncintiswano kuphela uma kwenzeka ukuthi wehlulekile ukusula ukuphakama izikhathi ezintathu zilandelana. Angaba badlulisele noma iyiphi ubude, okungukuthi bagxume 1.70, 1.80 bese wedlulela ngokushesha gxuma 1.90. Kepha Kumelwe ukhumbule ukuthi uma ngeke ukwazi ukuthatha kathathu ukuphakama 1.90 ke kuzoholela ukuphakama 1.70. Ngakho, kungenzeka ukulondoloza amandla, kodwa ethubeni jumping ngokucijile ngendlela embi, noma kungaba njalo nangekutetsemba hamba empumelelweni, kuzuba zonke eziphakeme futhi njalo nokunikeza uqobo yalokho okuhle. Lezi zixazululo umsubathi ukwakheka kuzuba ezemidlalo esijabulisayo.
Gxuma amasu ubude esuka endaweni. Kanjani ukuba siziphonse phansi sisuka endaweni
Irekhodi okumangalisayo ku-long jump ngesikhala: silinganisa ukuthi akekho wakwazi ziphumelela kangcono
Russian sibalo skater Viktoria Volchkova: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu
Dubrovin Evgeny: Biography nemisebenzi
Ukubeletha usana olusha - umsizi womama
Ruslana Pysanka - Biography, Filmography, empilweni yakho
Umbala Chinese: igama, incazelo nokubaluleka
Ngo umculo emphethweni - kungcono ... zomculo elithi "onqenqemeni"